Mashandisiro ekushandisa Face ID pane iPhone X neApple Pay | IPhone nhau
Ruben gallardo | | Apple Pay, iOS 11, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Nekusvika kweiyo nyowani iPhone X, nzira nyowani yekuchengetedza inonzi Face ID yaive ichiuyawo kumusika. Iyi system yaunoda unseat Kubata ID kuburikidza bhatani repamba. NeFace ID tinowana kuvhura uye chengetedzo sisitimu kazhinji pane yedu iPhone iyo yakanyanya kunetsa kunyepera; Kubudikidza nekutarisa kwechiso chedu, iyo iPhone X ichatitendera kuti tishande nayo kana kwete.
Saizvozvo, rimwe remasevhisi anozivikanwa kwazvo muchikamu chemafoni, uye kunyanya muApple, chiri kukwanisa kubhadhara nefoni yedu (smartwatch kana piritsi). Chaizvoizvo, isu tinoreva Apple Kubhadhara, imwe yedzinokurumidza kukura masisitimu ekubhadhara epasirose pasirese uye kuti mabhengi mazhinji uye akawanda anopa vatengi vavo. Kusvika parizvino, iyo sisitimu sisitimu yekuita kubhadhara yaive kuburikidza neminwe yedu yeminwe; ndiko kuti, kuburikidza neTouch ID. Nekudaro, pane iyo iPhone X isu tinofanirwa kushandisa, hongu kana hongu, kutarisana neID ID. Uye pano isu ticha tsanangura maitirwo azvo.
1 Kutanga: gadzira yako Apple Bhadhara
2 Chechipiri: shandisa Face ID nekushandisa kwayo muApple Pay
3 Chechitatu: kushandisa Face ID neApple Pay pane iyo iPhone X
4 Bhonasi: kutenga mu 'apps', iTunes Store, App Store kana iBooks Store
Kutanga: gadzira yako Apple Bhadhara
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita gadzira Apple Bhadhara pane yako iPhone X. Kuti uite izvi, tanga waenda kune iyo «Wallet» chikamu wobva wadzvanya «Wedzera kiredhiti kana kadhi rekubhengi». Ichave nguva yekuisa data rese rekadhi raunoda kushandisa uye mirira kusimbiswa kubva kubhangi rako kuti utange kurishandisa muzvivakwa zvakachinja POS.
Ehe, hazvigone kutaurwa izvozvo unogona kuisa makadhi akawanda sezvaunoda; Chinhu chega chaunofanirwa kuve nechokwadi ndechekuti bhanga rako rakanyoresa iyo Apple Pay sevhisi uye kuti kadhi rako rinoenderana. Naizvozvo, kana iwe uine chero mibvunzo, enda kuhofisi iri padyo ubvunze vashandi vebato.
Chechipiri: shandisa Face ID nekushandisa kwayo muApple Pay
Chinhu chinotevera iwe chaunofanira kuita ndeyekuti Face ID inogoneswa uye kuti inogona kushanda neApple Pay. Tinoita sei izvi? Yakapusa kwazvo: enda kune iyo "Zvirongwa" chikamu. Mukati iwe unofanirwa kutsvaga sarudzo iyo inokuudza "Face ID nekodhi." Iyo kodhi iyo yainokumbira kana iwe uchimanikidza iyi sarudzo yakafanana iyo iwe yaunoshandisa kuvhura iyo terminal iyo ine manhamba matanhatu.
Mushure mekuvhura iro basa, rinotevera richava ita shuwa kuti Face ID ine sarudzo yekushandiswa neApple Pay yakaitwa. Ive nekuchenjerera, ichave zvakare nzvimbo yaunofanirwa kuenda kugadzirisa zvese zvingasarudzwa zveiyo iPhone X nzira yekuchengetedza.
Chechitatu: kushandisa Face ID neApple Pay pane iyo iPhone X
Chinhu chekupedzisira chatinofanira kuita kutanga kushandisa Apple Kubhadhara kuburikidza neFace ID. Nguva dzose ita shuwa kuti iyo yekumberi kamera yeiyo iPhone X yakanyatso kufumurwa uye haina kuvharwa nemunwe kana nechifukidzo chekudzivirira.
Kana tangoenda kunobhadhara munzvimbo dzakasiyana, ku 'kukumbira' Apple Bhadhara iwe unofanirwa kudzvanya bhatani repadivi reiyo iPhone X kaviri. Kana uine akasiyana makadhi akanyoreswa uye iyo inowoneka nekusarudzika haisi iyo yauri kuda kushandisa, pinda-pinda-piri, zvakare, pane bhatani rerutivi uye sarudza rakakodzera kadhi.
Ipapo iwe unobvunzwa kuburikidza nefoni skrini kuti utarise kamera kuti ugone kushandisa Face ID uye kuvhura iyo foni uye uve nechokwadi chekuti ndiwe unoda kushandisa Apple Pay. Zvekare meseji ichaonekwa pachiratidziri ichikuudza kuti uunze iyo iPhone X kune inoenderana POS. Unofanira chengetedza iri padyo kusvikira chiratidzo chakakodzera chekuonekwa kana iwe uchikurudzirwa neyakareruka "OK". Rangarira kuti iwo nguva eNFC tekinoroji inopinda mukutamba. Zviratidzo zviviri izvi zvinosimbisa kuti kutenga kwako kwaitwa nemazvo.
Bhonasi: kutenga mu 'apps', iTunes Store, App Store kana iBooks Store
Ehe, iwe unogona kugara uchitenga muzvivakwa zvisiri zvepanyama. Ndokunge, muzvitoro zvepamhepo. Iyo mashini zvakareruka: iwe unofanirwa kugara uchisarudza sarudzo "Apple Pay" senzira yekubhadhara. Kamwe zvakare, iwe unozokurudzirwa kutarisa iyo iPhone X kamera.Kana chiso chako chazivikanwa, muripo unoitwa pasina matambudziko.
Kana ari App Store, iBooks Store kana iTunes Store, unofanirwa kumisikidza kushandiswa kweFace ID mumubhadharo wako. Dzokera ku "Zvirongwa"; Tarisa sarudzo "Face ID nekodhi" uye shandisa Apple zvitoro mune yemukati menyu. Kubva ipapo zvichienda mberi, kana uchinge wasarudza chinhu chauri kuda kutenga uye iwe uri mudanho rekubhadhara, tinya bhatani repadivi kaviri; tarisa kumberi kamera yeiyo iPhone X kupedzisa kutenga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Mashandisiro ekushandisa Face ID pane iPhone X neApple Pay
Nhasi ndazviwana ndiri mune iyo kesi ini ndaida kubhadhara nefoni yangu uye ndanga ndisingazive sei, ndatenda runako kuti yakandiudza pachiratidziri kuti ndibaye bhatani kaviri.